Madaxweynaha Puntland oo soo dhaweeyay Dastuurka Cusub ee Soomaaliya – SBC
Madaxweynaha Puntland oo soo dhaweeyay Dastuurka Cusub ee Soomaaliya
Posted by Webmaster on Agoosto 1, 2012 Comments
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa kulan saxaafadeed uu ku qabtay xarunta Puntland ee Garoowe ayaa soo dhaweeyay Ansixinta Dastuurka umada Soomaaliyeed oo maanta lagu ansixiyay gudaha Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Dastuurka la ansixiyay ay ka soo shaqeynayeen mudo islamarkaana uu mahad balaaran u celinayo u codeeya yaashii ergada ahaa ee Ansixiyay Dastuurka.
Waxa uu taabtay Madaxweynaha in Ansixinta Dastuurka iyo sanadguurada 14naad ee Puntland ay isku soo beegmeyn ayna tahay mid farxad leh islamarkaana uu ilaahey ku soo beegay .
Waxa uu rajo fiican ka muujiyay madaxweynuhu sidoo kale in Howsha halkaas laga amba qaado sida uu heshiisku ahaaba la soo magacaabo baarlamankii Cusbaa iyo heshiisyadii kaleba, isagoona ka digay Shaqsiyaadka la soo xulayo ay noqon kuwo aan sharci aheyn ee la soo xulo kuwo sharci ah oo ah waxii laga heshiiyay.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ku tilmaamay Dastuurkan mid wax ka bedeli doona xaalada dalka uguna duceeyay shacabka Soomaaliyeed in dastuurkani uu noqdo mid wax ka bedela nabadgeliyo iyo horumarna u horseeda.
Agoosto 1, 2012 at 7:28 pm
Kkkk cajiib pl ma garoowe iyo boosaaso santaka dame meel laga sheegayaa la wayaayaa
Agoosto 2, 2012 at 4:11 pm
Waa wax lala yaabog xageeh wax ka argatay mise waad riyonasa waadiga leh putland waa garowe iyo Bosaso wargal putland goryay u socata gadaal umasoctoh
amiir abdulaahi says:
Agoosto 3, 2012 at 2:28 pm
puntland waa wadan ween garowe waa casimadi bosasana waa magaladi ganacsiga lakin sxb waxey tahay puntland wadan ween mid la qarin karo ma ahan ee iska sax hadalkaga